Taattoota LibreOffice keessaa
LibreOffice akka ati taattoo tokko keessatti saxaatoon deetaa dheheesiitu sidandeesiissa, isaaniis walfaannee deetaa akka agartuutti, adeemsa mul'annoo deetaa keessaa madaaluu sidandeesiissa. Taattoowwan, wardiiwwan keessatti, galmeewwan barruu keessatti, fakkasaawwan keessatti, dhiheessa keessatti galchuu nidandeessa.
Taattootni deetaa armaan gadii irratti hundaa'uu nidanda'u:
Hangiiwwan man'ee Calc irraa gatiiwwan wardii
Gabatee Barreessaa tokko irraa gati man'ee
Gatiiwwan Qaaqa Gabatee Deetaa Taattoo keessa kan ati galchite(Taattoowwan kana ,barreessaa,fakkasaa, yookiin maxxansuuf , keessatti uumuu ni dandeessa,Calc gochuufiis jalteessitee maxxansuu ni dandeessa)
Taattoo tokko saaguuf
Akaakuu Taattoo Filachuu
Taattoo tokko gulaaluuf
Amalawwan wantaa taattoo gulaaluuf taattoo cuqaasi:
Hammamtaa fi qubannoo fuula ammaa irraa.
Hiriira, maraa barruu, handaaraa isa alaa, fi kanaaf kan kana fakkatan.
Haltaa gulaalii taattoochaa galchuuf, taattoo tokko irra lama-cuqaasi:
Gatiiwwan deetaa taattoo (taattoowwan deetaa mataa saantiin).
Akaakuu taattoo, matadureewwan, bifgarduubee, tarsaa, kanaaf kan kana fakkatan.
Haltaa gulaalii taattoo keessaa, miseensa taattoo tokko lama-cuqaasi:
Safaraa, akkaakuu, halluu fi kanaaf kan kana fakkatan gulaaluuf, siiqqee irra lama-cuqaasi.
Walfaannee deetaa filatame waliin, amalawwan qabxii deetaa tokkoo gulaaluuf, qabxii deetaa isa baqqee irra lama-cuqaasi (fakkeenyaaf, kabala baaqqee, taattoo kabala tokko keessaa).
Amalawwan gulaaluuf, miseensa taattoo kabiroo feetu irra lama-cuqaasi, yookin miseensicha cuqaasitii bafata Dhangi'i bani.
Haltaa gulaalii ammaa dhiisuuf, ala taattoochaa cuqaasi.
Qulquuliinaan taattoo tokko maxxansuuf, taattoocha gara faayilii PDF itti alerguun faayilii sana maxxansuu nidandeessa.
Baafata halqaraa banuuf maalimaa taattoo mirga cuqaasuu dandeessa. Maalimaa filatame dhangeessuuf baafatni halqaraa ajajoota hedduu kenna.
Matadureewwan Taattoo Gulaaluu
siiqqota taattoo gulaaluu
Waayoota Taattoo Gulaaluu
Makalluu Kabala Taattootti Ida'i
Title is: Taattoota $[officename] keessaa